Primakne - Kroatisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: primakne (Kroatisch - Burmesisch)
ထိုသို့ သန့်ရှင်းရာ ဌာနတော်အဘို့၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်အဘို့၊ ယဇ်ပလ္လင်အဘို့၊ အပြစ်ဖြေခြင်းကို ပြီးစီးပြီးမှ၊ အသက်ရှင်သော ဆိတ်ကို ဆောင်ခဲ့ရမည်။
Neka se sam Mojsije primakne k Jahvi! Oni neka se ne primièu,apuk neka se s njim ne penje."
Ako se lopov ne pronaðe, vlasnik kuæe neka se primakne k Bogu, da se dokae kako on nije spustio svoje ruke na dobra svoga blinjega.
လူတဦးသည် အိမ်နီးချင်းတဦး၌ ရွှေငွေအစရှိသော ဥစ္စတစုံတခုကို အပ်နှံ၍၊ အပ်နှံခံသော သူ၏အိမ်မှ သူခိုးခိုးသွားလျှင်၊ သူခိုးကို တွေ့မိသောအခါ နှစ်ဆလျော်စေ။
Jakov se primakne k svome ocu Izaku, koji ga opipa i reèe: "Glas je Jakovljev, ali su ruke Ezavove."
Ti i tvoji sinovi s tobom preuzmite sveæenièke poslove oko svega to spada na rtvenik i iza zavjese. Slubu koju dajem na dar vaem sveæenitvu vi obavljajte. A svjetovnjak koji se primakne neka se pogubi."
ထိုကြောင့် သင်နှင့်သင်၏သားတို့သည် ယဇ် ပလ္လင်နှင့်ဆိုင်သောအမှု၊ ကုလားကာအတွင်း၌ ဆောင် ရွက်စရာအမှုရှိသမျှတို့ကို၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ပြု၍ ဆောင် ရွက်ရကြမည်။ သင်တို့အား ကျေးဇူးပြု၍ ယဇ်ပုရော ဟိတ်အရာကို ငါပေးပြီ။ မဆိုင်သော သူသည် အနီးအပါး သို့ ချဉ်းကပ်လျှင်၊ အသေသတ်ခြင်းကို ခံရမည်ဟု မိန့် တော်မူ၏။
Reci im: 'Ako se ikad tko od vaih narataja primakne u stanju neèistoæe k svetim prinosima to ih Izraelci posveæuju Jahvi, taj æe biti uklonjen od moje nazoènosti. Ja sam Jahve!'
ထာဝရဘုရားအဘို့ ဣသရေလအမျိုးသား သန့်ရှင်းစေသဖြင့်၊ သန့်ရှင်းခြင်းရှိသော အရာတို့ကို၊ ကိုယ်မစင်ကြယ်လျက်နှင့် ချဉ်းကပ်သော ယဇ်ပုရောဟိတ် အမျိုးသား မည်သည်ကား၊ ငါ့ထံမှ ပယ်ရှင်းခြင်းကို ခံရမည်။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။
Kod nje u sobi bijae zasjeda i ona viknu: "Samsone, eto Filistejaca na te!" On pokida ile kao to se prekine kuèina kad se primakne ognju. I tako ne doznadoe za tajnu njegove snage.
il parles français (Französisch>Englisch)unti unti nagpundar (Tagalog>Englisch)koulutuslaitetta (Finnisch>Englisch)mga slogan tungkol sa puno o kalikasan (Tagalog>Englisch)viele grüße aus venedig (Deutsch>Italienisch)hi how r u (Englisch>Italienisch)vivísimo (Portugiesisch>Englisch)повтарящи (Bulgarisch>Katalanisch)mamui bal (Albanisch>Griechisch)duration (Holländisch>Französisch)isotopi (Italienisch>Russisch)döntést hozni (Ungarisch>Deutsch)nakshatra (Englisch>Tamilisch)bf jepang (Malaysisch>Englisch)terima kasih cikgu kerana mengajar saya (Malaysisch>Englisch)sanskrit essay on paropkar (Englisch>Hindi)skilles (Dänisch>Hebräisch)as maiora (Latein>Englisch)mendapatkan (Indonesisch>Hebräisch)quella (Italienisch>Englisch)animacions (Katalanisch>Esperanto)porozumienie (Englisch>Polnisch)legt (Holländisch>Griechisch)sandy (Spanisch>Englisch)kasi may gumising sa akin (Tagalog>Englisch)